Median’i Filipina miatrika ‘fandrahonana fanasaziana tsy ankitsahatra’ aorian’ny fiampangana fanendrikendrehana an’habaka · Global Voices teny Malagasy
Miditra dingana vaovao ny ady ataon'ny fitondrana Duterte amin'ny fampitam-baovao
Voadika ny 17 Desambra 2020 4:42 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, русский, Ελληνικά, Français, Español, English
Filoha Tale Jeneralin'ny Rappler, Maria Ressa (afovoany), mpanoratra tao amin'ny Rappler fahiny Reynaldo Santos Jr. (ankavia), ary ny mpisolovava Theodore Te (ankavanana) manatontosa valandresaka ho an'ny haino vaky jery taorian'ny fotoam-pitsarana tao amin'ny Lapam-pitsaram-Paritra Manila. Saripikan'i Kodao Productions, mpiara-miasa amin'ny Global Voices ara-botoaty.
Nomelohin'ny fitsarana iray tao Manila ny mpanoratra an-gazety iray anisan'ny manana ny lazany ao Filipina amin'ny raharaha iray heverin'ny maro fa fanafihana farany indray amelezana ireo feo maningana amin'ny fahafahan'ny fanaovan-gazety ao amin'ity firenena ity.
Nodidian'ny mpitsara Rainelda Estacio-Montesa ao amin'ny Sampam-pitsaram-Paritra faha-46 ao Manila ny tonia lehiben'ny mpanatanteraka ny tranonkalam-baovao Rappler, Rtoa Maria Ressa sy ny mpanangom-baovao teo aloha Reynaldo Santos Jr. higadra enimbolana sy iray andro farafahakeliny ka hatramin'ny enin-taona sy nandidy azy ireo handoa P400,000 (tokotokony ho US$8.000) tsirairay avy ho onitra ara-maoraly sy ohatra manoloana ny hafa.
Ressa sy Santos no mpanoratra an-gazety voalohany ao Filipina voaheloka amin'ny fanalam-baraka an'habaka hatramin'ny nandaniana ny lalana tamin'ny taona 2012. Navotsotra ry zareo rehefa nandoa solofonja mitentina 100.000 pesos (2000 dôlara) tsirairay avy tamin'ny taona 2019.
Lasibatry ny fitantanan'ny filoha Rodrigo Duterte ny Rappler, tranonkala iray miahy tena malaza iraisampirenena. Hitan'ny fitsarana anefa fa tsy manana fifandraisana amin'ny raharaham-panalam-baraka an'habaka ny Rappler.
Manao ho lasibatra ny Rappler
Nanangam-peo haingana dia haingana ireo mpanandra-peo ho amin'ny fahalalahan-gazety ao Filipina sy manerana izao tontolo izao fa ny fanamelohana an'i Ressa dia ao anatin'ny fanentanan'ny fitondran'i Duterte hampihorohoro sy hampatahotra ireo mpanoratra an-gazety.
Ny raharaha anenjahana an'i Ressa sy ny Rappler dia fitoriana tamin'ny taona 2017 napetraky ny mpandraharaha Wilfredo Keng noho ny fitantaran'ny Rappler tamin'ny taona 2012 ny lazaina ho fifandraisany tamin'ny Mpitsara Lehiben'ny Fitsarana Tampony Renato Corona, izay nesorina teo amin'ny toerany noho ny fiampangana azy ho nanao kolikoly tamin'izany fotoana.
Tsy noraisina tamin'ny voalohany ny raharaha Keng tamin'ny taona 2017 satria efa nihoatra ny fetra azo nandraisana azy ny fotoana. Ambonin'izany, ny lahatsoratra ihany koa dia nivoaka efa-bolana nialoha ny nampanankery ny lalànan'ny heloka an-habaka.
Fa nampidirin'ny departemantan'ny fitsarana tao Filipina indray ny raharaha avy eo, izay nanitatra ny fotoana azo anaovana fitoriana amin'ny fanalam-baraka an'habaka avy amin'ny herintaona ho 12 taona ary nolazaina fa tafiditra ao anatin'ny lalàna ilay lahatsoratra satria ‘navoaka indray’ tamin'ny febroary 2014, rehefa nanavao ny votoaty ny Rappler.
Raha nitsipaka izay mety ho ambadiky ny fitoriana fanalam-baraka an'habaka ry Duterte sy ireo mpitondrateniny, dia iharan'ny fahatezeran'ny filoha hatrany sy ireo mpiara-dia aminy ny Rappler noho ny fahavitrihana manadihady sy mandranty ny ady mihosin-dra amin'ny zavamahadomelina, ny fanodikodinan-doha ny media sosialy ary ny kolikoly.
Voarara ny mpanangom-baovaon'ny Rappler tsy ho afa-miditra amin'ny fanaovan'ny filoha tatitra amin'ny gazety tamin'ny taona 2018, noho ny filazan'i Duterte ho “famadiham-baovao” nandritra ny kabarin'ny filoha.
Maneso ny Rappler ho mpamafy “vaovao nodisoina” ny Pro-Duterte mpandoto rindrina ary manompa ireo mpanangom-baovaony.
Ity raharaham-panalam-baraka an'habaka ity no voalohany amin'ireo valo an-dalana amelezana an'i Ressa sy ny Rappler izay mbola ahitana raharaham-panalam-baraka iray hafa sy filazana ho fanitsakitsahana ara-ketra. Ireo raharaha rehetra ireo dia napetraka rehefa tonga teo amin'ny fitondrana i Duterte tamin'ny taona 2016.
Nanapa-kevitra ny governemanta Duterte hanakatona ny Rappler tamin'ny Janoary 2018, nilaza fa nohitsakitsahany ny lalàna amin'ny tsy-fahazoan'ny vahiny manana seha-pampitam-baovao — filazana izay hita miharihary fa diso.
Antson'ny mpanao fihetsiketsehana iray ny hanaovana ‘fitiliana ho an'ny daholobe, tsy fampanginana ny daholobe’ tao amin'ny fivoriana notontosaina tamin'ny 4 jona 2020, andro nandanian'ny Kongresin'i Philippine ny volavolan-dalàna iadiana amin'ny fampihorohoroana. Saripikan'i Kodao Productions, mpiara-miombon'antoka amin'ny Global Voices ara-botoaty.
Fanampenam-bava ireo feo maningana
Nomelohin'ny Kolejin'ny [fakiolte] Serasera ao amin'ny Oniversiten'i Philippines (UP), oniversitem-panjakana voalohany indrindra ao amin'ny firenena, ilay fanapahan-kevitra izay heveriny ho mpialoha lalana manome vahana ny manampahefana hitory izay rehetra mamoaka votoaty anjotra ao anatin'ny folo taona:
Afa-mitory hatrany ny fanjakana na dia folo taona, folo roa amby taona na mihoatra aorian'ny famoahana aza. fotokevitra fandrahonana fanasaziana mandrakizay tsy misy fetra na amin'ny fotoana na amin'ny tontolon'ny sibera.
Nilaza ny Sendikà Nasionalin'ny Mpanangom-baovaon'ny Philippines (NUJP) fa ny vesatra atrehin'ny Rappler dia vao ny farany monja amin'ny “tohivakam-pamoretana ny media izay nahitana ny fanakatonana ankaterena ny tambajotram-pampielezam-peo sy sary ABS-CBN sy fitomboan'isan'ny fanohintohinana ny mpanangom-baovao, satria tsy mahazaka tsikera na hevitra maningana ny lehilahy matanjaka indrindra ao amin'ny firenena”.
Noteren'ny governemanta tsy ho afa-mampiely sary sy feo ny tambajotram-pahitalavitra tsy miankina lehibe indrindra, ny ABS-CBN, tamin'ny volana mey farany teo rehefa tsy neken'ny kongresy pro-Duterte hohavaozina ny lisansa fampielezam-peo sy sarin'ny toby.
Izao fitomboan'ny fanenjehana ny media izao dia tafiditra ao anatin'ny tokotanin-tsehatry ny volavolan-dalàna anti-horohoro nolanian'ny andry fanaovan-dalàna izay mamela ny filoha hanangana vaomiera miady amin'ny fampihorohoroana nomena fahefana hanondro olona na vondron'olona ho “mpampihorohoro.”
Izany fanondroana izany anefa no ahafahana manao fampisamborana tsy mila taratasy (avy amin'ny fitsarana na famotorana) sy fihazonana maharitra 24 andro tsy misy fiampangana ara-pitsarana, ankoatra ireo fepetra henjana dia henjana hafa.
Tsy menatra ny manampahefana mitsipaka ny lalàna ho mandrahoana ny fahalalahana ao amin'ny firenena.
SARY AN'HABAKABAKA: mpanandratra teny sy mpikatroka zon'olombelona miisa 5000 manaja ny elanelana nandritra ny fetin'ny fahaleovantenan'i Filipina ary mihazona ny ‘Grand Mañanita’ manohitra ny volavolan-dalàna iadiana amin'ny fampihorohoroana navoakan'ny governemantan'i Duterte, 12 Jona, eo amin'ny Lalamben'i Oniversite, Oniversiten'i Philippines- Diliman, Quezon City. Sary sy fanazavana avy amin'i Kodao Productions, mpiara-miombona antoka amin'i Global Voices amin'ny votoaty
Tsy hiala vehana
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety taorian'ny fotoam-pitsarana azy i Ressa no nivoady tsy hiala vehana:
Ny fahafahan-gazety no fototry ny zo tsirairay anananao amin'ny maha-olompirenena Filipino anao. Rehefa tsy afa-mihazona ny fahefana hamoahana amin'ny ataony isika dia tsy ho afa-manao na inona na inona
Andro vitsy mialoha ny fiampangana an'i Ressa, an'arivony iero nihaika ny fihibohana hanatevin-daharana ny hetsika fanoherana ny volavolan-dalàna iadiana amin'ny fampihorohoroana any Manilla na dia eo aza ny fandrahonana hampiasan'ny polisy hery.
Fariparitan'ny mpanao fihetsiketsehana an'eso ho “mañanita” — voambolana nampiasain'ny jeneralin'ny polisy Debold Sinas, mpiara-dia amin'i Duterte, hanamarinany ny lanonana fankalazana tsingerintaona, izay notontosaina tanatin'ny famerana fatratra fivorian'olona, ny fihetsiketsehana tontosain-dry zareo.
Lohahevitra miverimberina any anaty sioka mampiasa ny farangoteny #DefendPressFreedom hatrany ny mizàna tsindrian'ila miaro ireo mpiara-dia amin'i Duterte sy ny fanomezam-bahana ny lalàna hamelezana ny mpitsikera ho setrin'ny raharaha Ressa.
Mijoro hiaro an'i @mariaressa Ray sy i @rapplerdotcom tsy hoe heveriko ho ambony lalàna ry zareo fa satria mampiseho ny filalaovan'ny govt Duterte ny lalàna hahatonga azy ho fitaovam-piadiana amelezana ny fahafahana sivily.
naIf they can do it to ABS-CBN and Maria Ressa (Rappler), they can do it to other media organisations and to anyone.#DefendPressFreedom pic.twitter.com/50IIJxbYaZ
Ny azon-dry zareo natao tamin'ny ABS-CBN sy Maria Ressa (Rappler), dia azon-dry zareo atao amin'ireo fikambanana fampitam-baovao hafa sy amin'ny rehetra.
JEREO: Randran-dresaka momba ny raharaham-panaratsiana an-tserasera an'i Maria Ressa
Androany, 15 jona, melohin'ny Fitsarana ao Manila ho manao fanaratsiana ny FTJ (fr:PDG) sady tonia mpanatanteraka ny Rappler Maria Ressa sy ny mpikaroka-mpanoratra teo aloha Rey Santos Jr